Sheekada filimka Happy Phirr Bhag Jayegi: Shactiro dhameestiran iyo qaab jiliin heer sare ah ugu imaaw – Filimside.net
Sheekada filimka Happy Phirr Bhag Jayegi: Shactiro dhameestiran iyo qaab jiliin heer sare ah ugu imaaw
August 24, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: August 24, 2018
Sanad walbo filimo ayaa si lama filaan ah tiyaatarka kaga gadmaan ayagoon hadal heyn xoogan xambaarsan sidaa darteed sanadii 2016 waxaa si la yaab leh guul wacan ku gaaray dadkana ay aadka kaga heleen filimka HAPPY BHAG JAYEGI.
Sidaa darteed labo sano kadib waxaa qayb labaad laga sameeyay filimkii qoysaska wada jeclaadeen qaybta labaadna waxaa loo bixiyay HAPPY PHIRR BHAG JAYEGI waana qasab in shactiro dhameestiran laga helo sidii looga bartay qaybtii kowaad.
Jilaayaasha filimkan: Sonakshi Sinha, Diana Penty, Jimmy Sheirgill, Ali Fazal, Piyush Mishra, Jassie Gill, Aparshakti Khurrana, Jeeveshu Ahluwalia
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 17-daqiiqo
Qiimeynta sheekada filimkan la siiyay: 3/5 (Sedex xidig)
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay HAPPY PHIRR BHAG JAYEGI: Inaba caadi ma ahan wajiga cusub ee sida loo shactireeyo waxna loo dhibo ee Sonakshi Sinha la timid, shactirada dhameestiran uu leeyahay iyo hadalada soo jiidashada leh ee lagu hadlaayo.
Muxuu Ku Liitaa HAPPY PHIRR BHAG JAYEGI: Sheekada filimkan qaybta dambe waa yara caajis sidoo kalena heesaha qaar waxaad moodaa in qasab ahaan ama si aan loo baahneyn loogu soo daray filimkan.
Fariinta Filimka HAPPY PHIRR BHAG JAYEGI Xambaarsan Yahay Oo Kooban: Waa sheeko ku saabsan dad la isku qaldaayo kana dhaceyso xuduuda Hindiya iyo China u dhaxeyso.
Harpreet Kaur aka Happy # 1 (Diana Penty) waxaa la socdo jaceylkeeda Guddu (Ali Fazal) waxayna u socdaan magaalada Shanghai ee dalka China si halkaas bandhig faneed kaga qayb qaataan ayadoo Guddu (Ali Fazal) goobta ka heesi doono.
Isla diyaarada China u socoto waxaa saaran Harpreet Kaur aka Happy # 2 (Sonakshi Sinha) oo u socoto magaalada Shanghai si ay ula soo kulanto wiilka guursan rabay Aman Singh Wadhwa (Aparshakti Khurana) kaasi oo maalinta arooskeeda diiday inuu iyada guursado Shiinahana iska aaday.
Airport-ka magaalada Shanghai waxaa ka dhacaayo jah wareer madaama Happy #1 (Diany Penty) boorkii soo dhaweynteeda loogu tala galay iyada iyo seygeeda lagu aqoonsan lahaa ay qaadaneyso Happy #2 (Sonakshi Sinha).
Sidaa darteed burcad rabtay inay afduubato Happy #1 iyo seygeeda waxay afduubanayaan Happy #2 oo Sonakshi Sinha ah ayagoon waxba sii baarin!
Chang (Jason Tham) ayaa afduubanayo asiga iyo ciidankiisa waxayna rabaan Happy #2 (Sonakshi Sinha) inay ku celiyaan Pakistan una geeyaan waalidkeeda ayagoo u maleeyaan inay soo wadeen Happy #1 (Diana Penty).
Kadib wuxuu fahmayaa burcadka Chang (Jason Tham) Happy #1 inaysan gacanta ugu jirin wuxuuna xoog kusoo kaxeesanayaa labada Happy #1 muuqaal ahaan garan karaan Daman Singh Bhagga (Jimmy Sheirgill) iyo Usman Afridi (Piyush Mishra) si gudaha China looga raadiyo.
Happy # 2 (Sonakshi Sinha) ayaa tuugada ka baxsaneyso waxayna la kulmeysaa ninka reer Punjab ah Khushwant Singh Gill (Jassi Gill) isagana garab ayuu ku siinaa sidii ay safaarada ku gaari laheyd.
Jah wareerka ayaa sii badanaayo markii Chang (Jason Tham) isagana ay ka baxsadaan labadii uu rabay inay Happy #1 soo qabtaan Daman Singh Bhagga (Jimmy Sheirgill) iyo Usman Afridi (Piyush Mishra).
Kadib filimkan qaybaha dambe waxaa loo daawan doonaa jah wareerka dhacaayo sida Happy #2 (Sonakshi Sinha) Hindiya ugu laaban laheyd iyo dhibaatooyinka ay la kulmi doonto.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Happy Phirr Bhag Jayegi: Director Mudassar Aziz wuxuu doortay fariin aan maangal ahayn balse mada daalo dhameestiran leh shactiro heer sare ahna loo sameeyay, kaliya filimkan qaybihiisa dambe ayaa lagu yara caajisaa laakiin sida guud waa mashruuc aan daawashadiisa laga xiiso dhigeyn in badana dadka jah wareerinaayo shactiro ahaan.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkan: Jimmy Sheirgill iyo Piyush Mishra ayaa qaateen cadka doolshada ama doorarka ugu shactirada badan filimkan kuna xiiso galinayaan.
Jimmy Sheirgill waa ruuxda filimkan waayo marka uu isaga kaamirada soo galo ayuu xiiso gaar ah filimka sii yeelanayaa laakiin waxay ku noqotay arin aan ka harin dhawaanahan filim walbo dhamaadkiisa gabbar la’aan ama atirisho la’aan inay ku dhacdo.
Sonakshi Sinha si heer sare ah ayay doorkeeda kaga baxsatay hadda kadibna filimada shactirada ah kaalin muuqato ayay ka qaadan kartaa waxaana u dheer in filimkan qurux iyo qaab soo jiidasho leh inay shaashada la timid.
Jassie Gill xidiga reer Punjab ee Bollywood-ka martida ku ah isagana si wacan ayuu doorkiisa kaga baxsaday waana qasab hadda kadib inuu aflaanta Bollywood-ka joogto wax kaga jilo bandhigiisa wacan awgeed.
Diana Penty iyo Ali Fazal fagta hore muuqaal badan kuma lahan filimka balse 20-ka daqiiqo dambe ayay saameyn culus la imaanayay iyo qaab jiliin lagu xasuuan karo.
Jason Tham oo laadarka filimkan jilaayo isagana doorkiisa ma xumo waxaana muuqato inuu leeyahay xeelado kala duwan oo Bollywood-ka xiligan looga baahan yahay.
Gunaanad: HAPPY PHIRR BHAG JAYEGI waa filim aan sheeko ahaan iyo shactiro ahaan ka liidanin qaybtiisii hore waana hubaal shactiradiisa dhameestiran inuu daawadayaasha kusoo jiidan doono dhanka Boxoffice-ka guul wacan ka gaari doono:
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka shactirada iyo jah wareerka badan HAPPY PHIRR BHAG JAYEGI: